Na dia mitombo aza ny varotra Apple dia tsy manavao ny orinasa ary ampitain'ny mpampiasa amin'izy ireo | Avy amin'ny mac aho
Na dia mitombo aza ny varotra Apple dia tsy manavao ny orinasa ary ampitain'ny mpampiasa azy ireo izany
Javier Porcar | | About us, maro
Androany isika dia nianatra ny valin'ny fanadihadiana izay manamarina zavatra nisy namindra. Ny marika, na eo aza ny fametrahana tarehimarika momba ny varotra, tsy izany Izy io dia heverin'ny mpampiasa antonony ho iray amin'ireo hita indrindra amin'ny sehatry ny varotra. Ny fanadihadiana dia fantatra any Etazonia amin'ny anarana hoe Ny lazan'ny toetran'i Harris ary ao anatin'izany dia nidina hatramin'ny faha-5 ka hatramin'ny 29 i Apple.
Marina fa tsy zavatra manokana ho an'i Apple izy io. Orinasa hafa mampitaha toa an'i Google dia manomboka amin'ny toerana faha-8 ka hatramin'ny faha-28. Manadihady ireto sokajy manaraka ireto izy ireo: andraikitra ara-tsosialy, fahitana ary fitarihana, fahombiazana ara-bola, fiantsoana ara-pientanam-po, tontolon'ny asa ary vokatra sy serivisy.
Ny toerana voalohany dia nalain'i Amazon indray. Orinasa tsy mitsahatra ny manaitra antsika amin'ny serivisy vaovao manamora ny fiainantsika izy ity. Manaraka izany ny marika sakafo amerikana. Tesla no mitana ny laharana fahatelo, vokatra ekolojika, na eo aza ny fahazoana olana farany, avo lenta izany ho azy ireo. Saingy ny fandefasana fiara eny amin'ny habakabaka dia toa nampiditra ny mizana tamin'ireo toerana ireo.
Manaraka, ary hatreto amin'ireo goavana teknolojia roa, dia mahita orinasa samy manana ny lazany sy Netflix, Nike, UPS, Walt Disney. Etsy ankilany, ny orinasan-teknolojia hafa dia tsy hahavery toerana betsaka toa an'i Microsoft. Ny orinasan'i Bill Gates dia mijanona amin'ny fironana ambony hatrany amin'ny fanavaozana, izay tsy mampiakatra azy amin'ny laharana ambony, fa amin'ny toerana milamina.
Mazava izany Ny toeran'ny Apple dia noho ny tsy fisian'ny fanavaozana miely tato ho ato. Miresaka momba ny spark foana ananan'ny orinasa sy ny fahagagana izahay. Ankoatry ny fanombanana sasantsasany, ireo vokatra ireo dia tokony hampiato fanairana ao Cupertino, amin'ny fironana azo tato anatin'ny taona vitsivitsy sy ny fomba fikasan'izy ireo hanohitra izany. Ny fialokalofana amin'ny tenanao amin'ny fanambarana fidiram-bola izay tsy mijanona mitombo, dia mety hidika ho fihenan'ny lazan'ny olona amin'ny taona ho avy. Apple dia tsy maintsy mamakafaka ny toe-javatra ary mamerina ny orinasa hiverina amin'ny lalan'ny vokatra vaovao tanteraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Na dia mitombo aza ny varotra Apple dia tsy manavao ny orinasa ary ampitain'ny mpampiasa azy ireo izany
Theine, ny fampiharana hitazomana ny Mac tsy hatory
Fakafakao ny fifandraisana Wi-Fi anao ary hamaha ny olan'ny fifandraisanao